PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-03-21 - Bakhala ngezinga lobugebengu nezi­dakamizwa eMand­lanzini
Bakhala ngezinga lobugebengu nezi­dakamizwa eMand­lanzini
KUGQUGQUZELWE abane­miqasho eMand­lanzini ukuba baqinise imi­thetho uma be­mukela labo abazo­qasha ku­len­dawo, ngenxa yokuthi eminye yemiqasho isiphen­duke isidleke sobugebengu kanye nezi­dakamizwa.
Lokhu kuqhamuke emh­langan­weni weza­khamizi za­ku­len­dawo, obu­bizwe yiKhansela uMnuz. Praisegod Zondo ngokubam­bisana nobuholi bomd­abu, uku­zodingida ud­aba lok­wanda kwemiqasho, nokugcina kuzala ubugebengu obuqhamuka ezi­dlekeni zezi­dakamizwa ezik­weminye yemiqasho.
Okukhal­isa iza­khamizi ukuthi abanikazi be­miqasho ba­mukela noma ubani os­e­fik­ile uku­zo­funa in­dawo yokuh­lala, benga­mazi lapho aqhamuka khona, nanokuthi ux­oshwe yini lapho ebehlala khona.
‘Si­funa ku­cace ukuthi kun­ina eningabokuhamba ku­len­dawo ukuthi, asinicwasi kodwa si­funa kuqine ezokuphepha, ukuze nani nivikeleke nih­lale ngokuthula ningap­haz­a­miseki,’ kuc­haza ikhansela.
Okunye oku­zo­siza ku­loluh­lelo ukuthi uma umuntu oqashile es­evelelwa inkinga, um­nikazi wen­dawo ahlala kuy­ona, ak­wazi ukux­humana nom­n­deni wakhe ukuze kun­gadaleki izinkinga ezin­ge­na­sidingo.
Sicela labo abane­miqasho ba­jwayele ukuham­bela izin­dawo, lapho kuh­lala khona labo ababahlal­isile, ukuy­obahlola ukuthi yonke imi­thetho ababeke­lene yona is­agciniwe yini, kuh­langene nokugcina in­dawo abakuy­ona ih­lanzek­ile.
‘Si­zophinde si­phume nen­qina si­ham­bele lezozin­dawo zokuqeda ukoma, sikhu­lu­misane na­banikazi bazo, ukuthi baqinise ezokuphepha, ukuze kun­gagcini seku­daleka ubugebengu obun­ge­na­sidingo, nokun­gagcina abanye be­lahlekelwa imiphe­fu­mulo.
Ikhansela liphethe ngokuthi abaqondile ukubal­wisa os­omab­hizin­isi, futhi abanankinga nam­ab­hizin­isi abo, kodwa ba­funa ukuthula en­daweni wonke umuntu aphile ngenku­l­uleko.
Okunye futhi okukhalwe ngakho uk­wanda kwezinga lezi­dakamizwa, nalapho im­inwe ikhomba khona amanye am­ab­hizin­isi aboku­fika, nagcina en­gasa­day­isi okud­ingwa umphakathi, kodwa ese­day­isa nezi­dakamizwa, naba­then­jiswe ukuthi oyotho­lakala enza lokho uyokhon­jwa in­dlela.
Crime a huge con­cern for Mand­lanzini com­mu­nity